Vaovao - Inona avy ireo toetra mampiavaka ny lamba polyester taffeta
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny lamba polyester taffeta
Taffeta dia antsoina koa hoe polyester taffeta, lamba tena mahazatra eo amin'ny fiainana, fa ankoatry ny olona matihanina dia tsy mazava ny olon-tsotra raha ny fahalalany azy, ka azontsika ny toetran'ny polyester taffeta.
Polyester taffeta lamba mampiavaka: ny polyester taffeta dia lamba fibre nentin-drazana, misy kalitao tsara, mateza ary mahatohitra, mora vidy, mora karakaraina ary tombony hafa, tian'ny olona. Indrindra aorian'ny fanodinana lalina sy ny fampiharana ny fizotry ny firakotra, dia nihatsara be ny fisehoan'ny lamba. Manokana, ny landy polyester matte dia raisina. Ny lamba vita amin'ity lamba ity dia manana loko marefo kokoa sy fisehoana manintona, izay mety amin'ny fanaovana akanjo mahazatra, akanjo fanatanjahan-tena ary fitafian'ny ankizy. Ny loko isan-karazany dia manampy amin'ny hatsaran-tarehy manintona. Matte polyester taffeta dia ekena noho ny fisehoany mamirapiratra sy ny vidiny ambany, ny polyester taffeta dia azo atao palitao, elo, fiara, akanjo fanatanjahan-tena, poketra, fonosana valizy, kitapo fatoriana, tranolay, ambainy mandro, lamban-databatra sns. Poly Taffeta dia karazan-damba vita amin'ny simika nentim-paharazana. Nalaza efa elaela izy io, saingy ny fivarotana dia nihena niaraka tamin'ny fanampian'ny vokatra vaovao vita amin'ny lamba sentetika. Tao anatin'izay taona faramparany, lamba polyester taffeta misy landy matte, ary misy toetra vaovao miloko eo amin'ny tsena. Izy ireo dia mampiasa kofehy polyester matte, izay malemy kokoa sy manintona kokoa. Izy io dia mety amin'ny fanaovana akanjo mahazatra amin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy. Misy loko am-polony maro, ny lamaody ambony dia lamaody tokoa, ampiana amin'ny fiangaviana manintona. Mora ekena ny matte polyester taffeta noho ny fisehoany mamiratra sy ny vidiny ambany. *** eo akaiky eo, taffeta fanoherana volom-borona avo lenta dia manana hatsarana miavaka. Feno hery. Izy io koa dia nanjary lamba manify lint-proof izay tadiavin'ny olona avy amin'ny fampirimana tsotra. Ny "290T na polyester taffeta maromaro" dia neken'ny mpanamboatra akanjo maro. Ny fepetra voafaritry ny vokatra dia 290T 300T 320T, sns. Ireo fitaovana filamentan'ny polyester tafiditra ao anatiny dia semi-gloss FDY48D / 48F 50D / 48F, sns.
Noho ny fivarotana palitao nidina, namboarina ho an'ny menaka sy fitaratra ao ambadiky ny lamba palitao ambany ny jet rano any ambany, ary koa ny firakofana ny palitao midina miaraka amin'ny anti-feather coating. Ny vala sy ny kofehy dia vita amin'ny polyester semi-blunt FDY50D / 48F ary ny tenona tsotra eo amin'ny loom-piramainan'ny rano. Izy io dia mifangaro arakaraka ny (290T na ambony). Malalaka ny lamba. Ny fihenan'ny alkali ho an'ny fandokoana plastika malefaka sy ny fizotrany hafa, arakaraka ny filan'ny mpanjifa, ny fanerena sy ny fihodinana ary ny fizotra manokana hafa, ny vokatra dia manana endrika mitovy, manify sy malefaka, malefaka sy marefo, tsy crunching ary tsy foul toetra, tsy afaka manao fotsiny lamba fialam-boly fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy no akanjo mety tsara amin'ny palitao ririnina. Izy ireo dia tsara tarehy sy malefaka, miaraka amin'ny fomba maoderina. Ny sakan'ny lamba dia 160 cm. Noho ny hakitroky ny F, ny fomba polyester taffeta dia tena mahazo aina tokoa, noho izany dia malaza be izy io. Noho izany, ny 48D / 48F 50D / 48F 68D / 48F amin'ny semi-polyester yarn tsena dia malaza be, ary ny vidin'ny kofehy polyester dia nisondrotra antonony.